Iyacubungula & Ukuthumela -
IZINQUBO ZOKUQHUBA (zombili amazwe namazwe ase-US)
Isikhathi sokucubungula izinsuku zebhizinisi ze-5-6. Lokhu kuphela ukulinganiswa okususelwe ekusebenziseni izikhathi zokucubungula futhi ingaba yinde noma ifushane kunezinsuku ze-5-6 ezishiwo. Amaviki amaviki namaholide ayizinsuku zebhizinisi.
I-Nubian Wig line, ukuvalwa, nezinwele eziningi kuzodinga isikhathi esengeziwe sokucubungula, noma yikuphi phakathi kwezinsuku zebhizinisi ze-5-12 ngenxa yesikhathi esithathayo ukwakha ama-wigs, nokuvalwa. Asinayo inqwaba (izinwele ezikhwele / ukukhwabanisa) esitokisini. Siyabonga ngokubekezela kwakho!
Ngesikhathi seholide nokudayiswa / usuku lokukhangisas kukhona ngokuvamile a Usuku lwebhizinisi lwe-2-3 ekusetshenzisweni ngenxa yemali enkulu yama-oda kodwa lokhu kungadlulela kuze kube ngesonto ekubambezelekeni.
Izinombolo zokulandelela izothunyelwa kuwo wonke ama-oda ngemuva kwesikhathi sokucutshungwa okuvunyelwe. Sizokuthumela inombolo yakho yokulandelela nge-imeyili kusuka ku-paypal.
Sithumela yonke imiyalo nge-United States Postal Service (www.USPS.com) usebenzisa i-imeyili ye-Priority 2-3 ngosuku ngemuva kokuthi i-oda lakho seliqedile ukucubungula.
Izandiso Zezinwele Zami Zemvelo azikho obhekene nanoma yikuphi amaphakheji alahlekile noma asebiwe once tracking isiqinisekisiwe ukukhululwa. Asibuyiseli abathengi nganoma yiziphi amaphakheji alahlekile noma abiwe ngenxa yezimo ezingalindelekile ezivela ekulawulweni Kwami Izintambo Zezinwele Zami. Sicela uqinisekise ukuthi uthunyelwa endaweni ephephile. Wonke ama-oda azofika U-$ 50 wemfanelo yomshuwalense Uma ungathanda ukuqinisekisa inani eligcwele sicela uxhumane nathi nge-imeyili ngenombolo yakho ye-oda ngemuva kokuthenga.
imiyalo ye-$ 250 noma ngaphezulu izokwazi ukuthunyelwa mahhala! Ukukhetha ukukhokhela ukuthunyelwa ngeke kwenzeke ukuthi kufike ngokushesha.
Sicela ubeke umyalelo ngosuku oluzokunika lona isikhathi esanele ukuthola i-oda lakho ngaphambi izinwele zakho ukuqokwa. Isikhathi sokucubungula asikwazi ukuhanjiswa noma ukuchazwa. Noma kunjalo isikhathi sokuthumela singaboniswa.
IZIKHATHI ZOMHLABA (wonke amazwe ngaphandle kwe-United States)
Ama-oda azothunyelwa nge U-USPS (www.USPS.com) ngemuva kwesikhathi sokucutshungwa okuvunyelwe.
Ukuthumela kungabuka ku-25 $ - $ 65 yemiyalo yamazwe ngamazwe.
Noma yiziphi amaphakheji ezingaziwa futhi abuyiselwe kithi uzothola ukubuyiselwa kwempahla kuphela. Izimali zokuthumela ngeke ziphinde zikhokhiswe.
Kuye ezweni lakho iphakheji lakho lingase libe ngaphansi kwe-a intela yamasiko noma umthwalo wemfanelo ekufikeni. Le nkokhelo eyengeziwe ayinayo imali okukhokhwa yi-MHEHE noma i-United ithi. Sicela uhlole i-ejensi yakho yamasiko ukuze uthole ukuthi le mali izosebenza yini kuwe. Uma kunjalo kuyodingeka ukhokhe leyo mali ukuze uthole impahla yakho.
Izandiso Zezinwele Zami Zemvelo azikho obhekene nanoma yikuphi amaphakheji alahlekile noma asebiwe once tracking isiqinisekisiwe ukukhululwa. Asibuyiseli abathengi nganoma yiziphi amaphakheji alahlekile noma abiwe ngenxa yezimo ezingalindelekile ezivela ekulawulweni Kwami Izintambo Zezinwele Zami. Sicela uqinisekise ukuthi uthunyelwa endaweni ephephile. Wonke ama-oda azofika U-$ 100 wemfanelo yomshuwalense Uma ungathanda ukuqinisekisa inani eligcwele sicela uxhumane nathi nge-imeyili ngenombolo yakho ye-oda ngemuva kokuthenga.
Juni 20, 2017 ku-5: 03 pm
Ingabe i-5-6 yosuku lwebhizinisi elilindile, uma kuthatha isikhathi eside, ngingathola imali.
Juni 20, 2017 ku-10: 23 pm
Akuyona i-garuntee, Kuyinto yokulinganisa. Kungaba isikhathi eside noma esifushane kunesikhathi esiphezulu sokucubungula. Kodwa-ke senza konke okusemandleni ethu ukuze sithole yonke imiyalo ngaphandle kwaleso sikhathi. 🙂
Meyi 8, 2018 at 5: 53 pm
Izinwele zesampuli zithatha ngokulinganayo isikhathi eside ukuthola?
Futhi, unaso izinwele eziningi zokukhanga? Ngiyibona kusayithi lakho ukuyala, mhlawumbe ngiyifunda ngokungalungile kepha ngicabanga ukuthi ibonisa ukuthi ayitholakali ... plz ukweluleka
Meyi 8, 2018 at 10: 35 pm
Sawubona. Ayikho iphakheji yesampula ehambisa cishe ezinsukwini zebhizinisi ezingu-1 - 2.
Julayi 16, 2018 ku-11: 10 pm
Ngakho-ke kulinganiselwa ukuthini ukucubungula nokuthunyelwa kwezinwele eziningi ezisetshenziselwa i-crochet ne-braiding?
Disemba 27, 2018 ku-5: 55 pm
Kuxhomeke kumyalelo wethu wamanje wokuthi. Ngokuvamile amasonto e-1-2 kusukela ngesikhathi oya kuyo ukuze athunyelwe emnyango wakho.